ခိုင်ခိုင်စောလွင်: December 2016
" ဈေးပတ်"၂၆ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၆ခုနှစ် ၊ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၅) အမှတ်(၅၀)
ချင်းမိုင် ဆောင်းရာသီက မိုးတဖွဲဖွဲ ဖြင့်စလေသည်။ နိုဝင်ဘာလကုန်လို့ ဒီဇင်ဘာကို ကူးတာတောင်မှ ရာသီဥတုက ပူအိုက်နေတဲ့အတွက် ဒီနှစ် အေးပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးက မိုးသံကြောင့် ပျောက်သွားရသည်။ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလ အလွန်အမင်း အေးလှသည့် အချိန်မှာ မိုးတွေ ရွာချကာ (၁၀)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ အပူချိန်ကျဆင်းခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်မှာ ရေခဲမှတ် ရောက်အောင် အေးခဲ့သည့် အတွက် ဒီနှစ်လည်း အအေးပိုမလား ထင်ခဲ့မိသည်။ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်း (၇)ရက်ခန့်အထိ အပူဓါတ် ရှိနေရာက ရုတ်တရက် မိုးရွာလာပြီးမှ အေးလာကာ ဆောင်းပီပြင်လာတော့သည်။ ပန်းတွေဝေဝေဆာဆာ ပွင့်လာကြသည်။ ခါတိုင်း ပန်းတစည်း ဘတ်(၂၀)တန်မှာ ပန်း(၃) ခက်ခန့်သာ ပါပေမယ့် အခုတော့ (၅)ခက်ရလာသည်။ ပန်းတွေပေါပြီး လှလာသည်။ လူတွေလည်း ခရီးသွားကြ လည်ကျပတ်ကျ တွေ့မြင်နေရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ခရီးသွားတွေ အလာများသည့် ခရီးသွားရာသီအတွက် လှလှပပ ဆွဲဆောင်မှုတွေ များစွာ ပြင်ဆင်ထားကြရာ အလှဆုံးအချိန်လို့ ပြောရမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် စွဲဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာတွေ မြင်ရတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ အထူးတလည် မပြင်ဆင်ရပဲ လှနေသည့် သဘာဝအလှတွေကို သတိရမိလေသည်။ တည်းခိုစားရိတ်၊ အစားအသောက် ဖန်တီးမှုနှင့် ခရီးသွားလာဖို့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ စနစ်ကျပါက သဘာဝအလှကို သဘောကျသည့် ခရီးသွားတွေအတွက် မြန်မာပြည်ဟာ လည်ပတ်စရာ အကောင်းဆုံး စွဲဆောင်မှု အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာသည်။ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ဖူးသည့် ထိုင်းလူမျိူးတွေက ဒီလောက်လှတဲ့ မင်းတို့ တိုင်းပြည်က နေရာအတော်များများကို ဘာဖြစ်လို့ အသုံးမချသလဲ မေးသည်။ ထိုင်းကို အလည်လာရောက်သည့် မြန်မာမိတ်ဆွေတွေကလည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ အံ့ဩတကြီး လည်ပတ်နေသည့် နေရာမျိူးတွေ မြန်မာမှာလည်း ရှိတာပဲ၊ ထိုင်းလူမျိူးတွေကမှ ပြင်ဆင် မွမ်းမံထားရတာတွေ ရှိသေးတယ်၊ တို့ဆီမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့ အလှတွေ ဖြစ်အောင် သူတို့က ပြင်ဆင်ထားတာ၊ ထိုင်းတွေက လုပ်စားတတ်သွားပြီ၊ တို့မြန်မာတွေ လုပ်တတ်ဖို့ လိုသေးတယ် ပြောကြတာ အမြဲကြားရလေသည်။ ခရီးသွားတွေ အဝင်များသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ပြန့်ကျဲ များပြားလိုက်သမှ ရပ်ကွက်ဈေးလေးတွေအထိ ဧည့်သည်တွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လို့နေလေသည်။
တပတ်မှာ တရက် တရက်မှာ တမနက်သာ ဖွင့်သည့် သောကြာဈေး၊ ထိုင်းအခေါ် တလာဝမ်စွတ် ဆိုသည့် ဈေးကလေးမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေ ဈေးလာကြတာ တွေ့မြင်နေရသည်။ အဆိုပါ သောကြာဈေးက နာမည်ကျော် ညဈေးဖြစ်သည့် နိုက်ဘဇာ ဈေးအတွင်းဘက်မှာ ရှိသည်။ အဆိုပါ ဈေးရဲ့ အဝမှာ ဗလီကြီး တခုရှိသည်။ သောကြာနေ့မှာ ဗလီတက်သည့် သူတွေအတွက် အစားအသောက်တွေ လာရောက်ရောင်းချရာက အဆိုပါဈေး စဖြစ်တာလို့ ကြားဖူးသည်။ ဈေးဆိုပေမယ့် ဆိုင်နှင့်ကန္နားဖြင့် မဟုတ်၊ ပျံကျဈေးသာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဈေးကမှ လူမျိူးစုံရဲ့ အစားအသောက်တွေ တစုတဝေးထဲ ရသည့်နေရာ ဖြစ်သည်။ ကုလားအစားအစာ၊ မြန်မာအစားအစာ၊ တရုတ်အစားအစာ၊ ရှမ်းအစမ်းအစာ စုံလှသည်။ စမူဆာ၊ နံပြား၊ ဒန်ပေါက်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အီကွေ့၊ ပေါက်ဆီ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ မြီးရှည် တို့ဟူးနွေး စသဖြင့် စားသောက်ဖွယ်ရာတင်မက အသုံးအဆောင်နှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်း ထို့အတူ၊ ယုဇနလက်ဖက်၊ ရွှေမြန်မာလက်ဖက်၊ စိန်တံဆိပ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်၊ ယင်းမာဘိနပ်၊ မြန်မာပြက္ခဒိန်၊ စံဇာနည်ဘိုရဲ့ ၁၂လရာသီဖွားတွေအတွက် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ကအစ ရသည်။ ကုလားပဲ၊ လွင်မဆလာ၊ ထိုဈေးမှာရသည်။ မြန်မာပြည်က မွှေးတံဆိပ် ပဲမှုန့် အစိမ်း၊ အကျက်နှင့် အခြားအမှုန့်မျိူးစုံ ရသည်။
လာသည့် လူတွေကလည်း စုံလှသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်က လူမျိူးစုံအပြင် ကုလား တရုတ် ၊ ဥရောပသား စုံလှသည်။ ယခင်ကတော့ ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေသာ လာရောက် ဈေးဝယ်ခြမ်းကြတာ ဖြစ်သည်။ ရောင်းသည့် ဈေးသည်တွေကလည်း လူမျိူးစုံသည်။ ကချင် နှင့် ရှမ်းတွေ အများစုဖြစ်သည်။ တချိူ့က ဗမာလို မပြောတတ်၊ အတော်များများကတော့ ပြောတတ်သည်။ တချိူ့က စကားသံကြားက ဗမာစကားမှန်း သိပေမယ့် ပြန်မပြောတတ်တာလည်း ရှိသည်။ အများစုက ဗမာလို ပြောတတ်သဖြင့် ဈေးဝယ်လို့ ကောင်းသည်။ ဈေးသည်တွေရဲ့ တိုင်းရင်းသားသံဝဲဝဲနဲ့ ပြောတဲ့ အသံ ကြားရပြီး ရောင်းကုန်တွေကလည်း မြန်မာပစ္စည်းတွေ ရောင်းကြတာဆိုပြန်တော့ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားဒေသတခုရဲ့ ဈေးကို ရောက်နေသလို ခံစားရသည်။ လတ်ဆတ်သည့် အသီးအရွက်မျိူးစုံကလည်း တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသား ဒေသထွက်တွေချည်းမို့ ဈေးသည်နှင့် ရောင်းသည့် ပစ္စည်း တွဲကာ တောင်ပေါ်ဒေသရောက်နေသလိုလို၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီကို ရောက်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား အလုပ်သမားတွေက သောကြာဈေးကို အပတ်စဉ် မပျက်မကွက် လာတတ်ကြသည်။ ဒေသထွက်ကုန် အသီးအရွက်တွေ ဝယ်ပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်တီ တို့ဟူးနွေး ဆန်စေး စားကြမည် အားခဲကာ လာရောက်ကြတာ ဖြစ်သည်။ ဈေးပတ်ရက်မှ ဒါမျိူးကြုံရတာမို့ပင်။
ဈေးရောင်းသူ တဦးတည်းကိုကပင် ထိုင်းစကား ရှမ်းစကား ဗမာစကား အစုံ ပြောတတ်ရာ တယ်ဟုတ်ပါလား ချီးမွမ်းမဆုံး၊ ယခုတော့ တရုတ်ခရီးသွားတွေ အများဆုံးလာကြရာ တရုတ်စကားပါ ပြောကြလေသည်။ တရုတ်စကားဖြင့် မွှတ်နေအောင် ပြောနေသည့် ကချင်တိုင်းရင်းသူ ရှမ်းခေါက်ဆွဲသည်ကို" စကားတွေ အစုံပြော တတ်တယ်နော် "အပြောကို ရယ်မောလေသည်။ သူ့ဆိုင်မှာ စားနေကျပေမယ့် သူ တရုတ်လို ပြောတတ်တာ မသိ၊ ဗမာလို ပြောတတ်၍ အဆင်ပြေသဖြင့် သူ့ဆိုင်မှာ နှစ်နဲ့ချီကာ ဈေးပတ်ရောက်တိုင်း စားဖြစ်သည်။ ယခုလို တရုတ်ခရီးသွားတွေ များလာပြီးသူ ပြောနေတာမြင်မှ တရုတ်စကားပါတတ်မှန်း သိခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတင်မက ခေါပုပ်ကင် ရောင်းသည့် မိန်းကလေးလည်း တရုတ်ဈေးဝယ်လာက တရုတ်လို၊ ထိုင်းဈေးဝယ်လာက ထိုင်းလို၊ ဗမာဈေးဝယ်လာက ဗမာလို၊ အခြား နိုင်ငံသားတယောက်က အင်္ဂလိပ်စကား ပြောက အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာစကားစုံအောင် ပြောပြီး ရောင်းနိုင်လေသည်။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာပြည်တွေ သိပ်တော်တယ်လို့ ကျိတ်ပြီး ဂုဏ်ယူမိရသည်။
အဆိုပါ ဈေးမှာ ရောင်းနေကျ ဈေးသည်တွေမှာ ဒီဈေးထဲတင် မကြာခဏ နေရာရွှေ့ရောင်းကြရတာ တွေ့ရသည်။ ပိုင်ရှင်က မြေနေရာမှာ အဆောက်အဦတွေ ဟိုဒီရွှေ့တာ၊ ညဈေးတန်းအတွက်ထားတဲ့ ဆိုင်ခုံတွေ နေရာပြောင်းတာ၊ အမိုးတွေ အသစ်လဲတာ၊ အဆောက်အဦချဲ့တာ လုပ်တိုင်း နေရာလေးတွေ ရွှေ့ပေးရမြဲ၊ ဒီအဝန်းအဝိုင်းထဲမှာကို ရွှေ့လိုက် ပြောင်းလိုက် ရောင်းနေရသော်လည်း တခါမှ ငြီးငြူတာ မတွေ့ရ၊ ဝယ်သူတွေကလည်း ဒီအဝန်းအဝိုင်းထဲ လှည့်ပတ် ဝယ်ကြရင်း ဝယ်နေကျ စားနေကျ ဖောက်သည်ကို တွေ့အောင် ရှာစားကြတာ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်က စားနေကျ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင် မတွေ့၊ မထွက်ဟု ထင်ပြီးမှ အဆောက်အဦတခုရဲ့ အောက်မှာ ပြောင်းရောင်းနေတာ တွေ့ရသည်။ တပတ်ခန့် အရောင်းအဝယ်အေးပြီး နောက်အပတ်ကျ ဖောက်သည်တွေက သိပြီး ချောင်ကျကျ အဆောက်အဦထဲက သူ့ဆိုင်နေရာလေးကို တိုးဝှေ့ လာစားကြသည်။
" သောကြောဈေး ဆိုတာ အမြဲပြောင်းနေတာလေ အမျိူးမျိူး ပြောင်းပြီး ရောင်းနေရတာ ရိုးနေပါပြီ" လို့ ဈေးသည်တွေက ဆိုကြလေသည်။
ယခင်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အများစု ဈေးဝယ်ကြပေမယ့် မနှစ်က ခရီးသွားရာသီကစလို့ တရုတ်လူမျိူးတွေ အများစု လာကြသည်။ သူတို့လည်း တယောက်စကား တယောက် သတင်းပါကြပုံရသည်။ တကူးတက လာကြပြီး သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အသီးအနှံတွေကို ဝမ်းပန်းတသာ ဝယ်ယူကြသည်။ တောဝက်သားကအစ၊ မှိုမျိူးစုံ၊ ကချင်ဒေသထွက် ဆေးမြစ်စုံ အပါအဝင် ပျားရည် နှင့် သစ်ခွပန်းပင်လို သစ်တောထွက်မျိူးစုံ တွေလည်း တောင်ပေါ်ရွာသားတွေထံက ဝယ်ယူကြသည်။ရံဖန်ရံခါ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဓါတ်ပုံလာရိုက်တာလည်း မြင်ရသည်။ ထိုင်းကျောင်းက မူကြို၊ မူလတန်း ကလေးငယ်ကလေးတွေ လေ့လာရေး ဆင်းတာလည်း ရှိသည်။ ကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပုံလေးတွေပါသည့် စာရွက်ကလေးတွေ ကိုင်ထားပြီး ဈေးထဲမှာ ရောင်းတာ တွေ့က အဆိုပါ ပုံလေးတွေကို အမှတ်အသား လုပ်ရသည်။ အချိူ့က ဈေးပါ မေးပြီး ဈေးနှုန်းပါ ရေးထည့်ကြရသည်။ တခါတလေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ သူတွေ စစ်တမ်းကောက်တာ တွေ့ရသည်။ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလှသည်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ တပွဲမှာပြီး တယောက်တဇွန်းခပ်စားကာ အရသာ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို စာရွက်မှာ တယောက်ချင်း ချရေးကြသည်။ ကျောင်းပြန်ရောက်က အဖွဲ့လိုက် ပြန်ရှင်းပြကြရပေမည်။
တပတ်တခါသာ ဖွင့်သည့် အဆိုပါ ဈေးလေးမှာ လူမျိူးစုံသည်။ ယဉ်ကျေးမှုစုံသည်။ ဘာသာစကားစုံသည်။ အစားအသောက်စုံသည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုစုံသည်။ အပြုံးတွေလည်းစုံသည်။ အားလုံး ယဉ်ကျေးပြူငှာ ဖော်ရွေကြသည်။ ဈေးကလေးကို ခြုံကြည့်ပါက မတူသည့် လူမျိူးတွေ ဘာသာစကားမျိူးစုံပြောကာ မတူကြမှန်းသိလျက်နှင့် အဆင်ပြေအောင် ပြောဆို ဆက်ဆံ နေကြတာ ချစ်စဖွယ်အပြုအမူ တခု ဖြစ်လို့နေလေသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 9:04 PM No comments:
" ဟန်ညီညီချီ"၁၉ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၅) အမှတ်(၄၉)
မြန်မာပြည်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တရိပ်ရပ်တက်တယ်တဲ့ ၊ ထိုင်းမှာလည်း တနှစ်တနှစ် မသိမသာတက်လာလိုက်တာ ဒီနှစ်ကျ သိသိသာသာ ဈေးနှုန်းတွေ ပြောင်းလာတာ သတိပြုမိရသည်အထိ၊ ဒါပေမယ့် ဘာတွေ ဘယ်လောက်ဈေးတက်တက် တော်ရုံမတက်သည့် ပစ္စည်းအမျိူးအစား တွေများစွာ ရှိသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ အမြဲတန်း လိုလို နှစ်စဉ် တက်နေတာက အရက်နဲ့ ဆေးလိပ် ဖြစ်ပြီး သူတို့ အပေါ် အခွန်နှုန်းကောက်တာလည်း မကြာခဏ တိုးတတ်သေးသည်။ လုံးဝ မတက်တာက အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုတ်ကလေးတွေ ဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်၍ မကျေမနပ် ဖြစ်သံ သိပ်မကြားရတာ ဖြစ်မည်။
ချင်းမိုင်ကို ရောက်စ ထိုင်းမှာ အနေကြာသည့် မိတ်ဆွေ တယောက်က ပြောသည်။ မာမားခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် ငါးဘတ်ကနေ ခြောက်ဘတ်ကို ဈေးတက်တာ ပြည်သူတွေ ပူညံပူညံ လုပ်လို့ ငါးဘတ်နဲ့ပဲ ရောင်းပေးရသည်တဲ့၊ ထိုအချိန်တုန်းက ထိုင်းမှာ ရှိမနေတဲ့ အတွက် ကိုယ်တိုင် မကြုံခဲ့ပေမယ့် အခုလို ထိုင်းမှာနေရတဲ့ (၆)နှစ်တာကာလအတွင်း မာမားခေါက်ဆွဲခြောက်အပါအဝင် အခြား အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ တထုတ် ငါးဘတ်က ငါးဘတ်ပဲ ၊ ဈေးမတက်တာ သတိထားမိသည်။ တခုတော့ ရှိသည် ၊ တံဆိပ်တူကိုပဲ အလေးချိန်တိုးကာ အထုတ်နဲနဲ ကြီးပြီး ရှစ်ဘတ်တန် အသစ်ထွက်လာသည်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ကိုယ်ရွေးချယ် ဆိုသည့် သဘော၊ ထိုင်းလူမျိူး စီးပွားရေးသမားတွေမှာ အများအားဖြင့် စားသုံးသူတွေ အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်အောင် ဈေးကွက်စစ်တမ်း(ဆာဗေး ) ကောက်သည့် အကျင့် ရှိကြသည်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သွားတိုက်ဆေးဘူးတဘူးကို ငါးဘတ် ဈေးတင်တော့မည်ဆိုက ဒီတံဆိပ်ကိုပဲ ဘူးအရောင်ပြောင်းလိုက်တာမျိူး၊ ပါဝင်ပစ္စည်း တခုခု ပြောင်းတာမျိူး လုပ်ပြီး အသစ်ထုတ်လိုက်သည်။ အရင်အဟောင်းကို တခုဝယ်က တခု အလကား( buy 1 get 1) ဖြင့်ဈေး ချလိုက်သည်။ ဈေးဟောင်းဖြင့် ရောင်းသည့် ပစ္စည်း ပြတ်သွားသည်။ သူ့ပစ္စည်း ဈေးတက်တာမဟုတ်၊ နောက်အသစ်ထုတ်တာမို့ ဈေးတမျိူး လို ပြောင်းလိုက်သည်။ ဈေးတက်တယ်လို့ စားသုံးသူတွေ မမြင်ရလေအောင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့် စီးပွားရေးနည်းဗျူဟာ တမျိူး ဖြစ်မည်။
နောက်တမျိူးက ကုန်ပစ္စည်းတမျိူးကို အရွယ်စုံ ထုတ်ပေးပြီး ဈေးနည်းနည်းပဲ တတ်နိုင်သူက သေးတာယူ၊ ဒါမှမဟုတ် လူနည်း၍ နည်းနည်းပဲ အသုံးလိုသူက လိုသလောက် တန်ရာတန်ကြေး အနည်းငယ်သာပေးဝယ်လို့ရအောင် ထုတ်လုပ်တာဖြစ်သည်။ အစားအသောက်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အားလုံး လိုလို တံဆိပ်တူ၊ ပစ္စည်းအမျိူးအစားတူ ကို ၅ဘတ်တန်ကနေ (၂၀) (၃၀) စသဖြင့် ခွဲပေးထားရာ လူတန်းစေ့ လူတိုင်း မသုံးနိုင်သည့် ပစ္စည်းမရှိ၊ လူတိုင်း သုံးနိုင်အောင် ကြံဆောင်ထားတာမှာ စီးပွားရေးတွက်တွက်က လုပ်ငန်းရှင်အဖို့လည်း တွက်ခြေကိုက်လှပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေကြသည့် စနစ်။
ဒါက ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ့်ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင် ထုတ်နိုင်လို့ အားသာတဲ့ အချက်တခုပင်၊ မြန်မာနိုင်ငံလို ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန် မရှိ၊ ရှိသော်လည်း မလောက်င၍ ပြည်ပက ဝယ်ယူတင်သွင်းရသူ အဖို့ ဈေးမတက်၍ မရ၊ သူတို့တက် လိုက်တက်ရသည့် အပြင် ငွေလဲလှယ်နှုန်းလိုက်ပြီး တက်သွားတာလည်း ရှိသေးသည်။
ထိုင်းမှာက ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ဒီဈေးက ဒီဈေးပင်၊ မတက်၊ ရာသီပေါ် အသီးအနှံဆိုတာ ခပ်ရှားရှား၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီ သီးအောင်၊ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်သည်မသိ၊ ခရမ်းချဉ်သီး တမျိူးသာ ရာသီပေါ်ချိန်မှာသာ ဈေးသက်သာပြီး သူတုံးချိန်မှာ ဈေးတက်တာ မှတ်မှတ်ရရ သတိထားမိသည်။ သား ငါး အမဲ ဝက် ကြက်တို့က တရှိန်ထိုး မတက်ပေမယ့် တအိအိတက်ရင်း လွန်ခဲ့သည့် (၆) နှစ်ခန့်က ငါးခူ တကီလို (၅၀) ဘတ်ကနေ (၅၅)ဘတ်၊ (၆၀)၊ ( ၆၅) ဆိုသလို မသိမသာ တက်လာတာမှာ ဒီကနေ့ ငါးခူတကီလို ဘတ်( ၈၀) ဖြစ်နေပြီ။ တနှစ်တနှစ် တက်တာ မသိသာပေမယ့် ယခု ပြန်ကြည့်မှ ဈေးကွာလာတာ သတိထားမိတာ ဖြစ်သည်။ တက်ပြီးရင် ပြန်မကျတာ ကုန်ဈေးနှုန်းလို့ မြန်မာတွေက ဆိုပေမယ့် ထိုင်းမှာတော့ အတက်အကျလေး ရှိသေးတာ သတိထားမိသည်။
ဒီဇယ်ဈေး၊ ဓါတ်ဆီဈေး တွေက အတက်အကျ ရှိသည်။ ယခုရက်ပိုင်းမှာပင် လောင်စာဆီ ဈေးတက်သည်။ တလီတာကို လေးဘတ်ခန့် ဈေးတက်သည်။ ဆိုင်တွေမှာ ဒီဂျစ်တယ်စက်တွေနဲ့ ပြထားတော့ ကျတဲ့အခါ ဈေးနှုန်းပြောင်းပြတာ သတိထားမိသည်။ တက်ပြီး ဆက်တက်သွားတာ သိပ်မတွေ့ရ၊ ကျချိန်တန် ပြန်ကျလေသည်။
အခုအချိန်မှာ အကျချင်းတူနေတာက စပါးဈေး ဖြစ်သည်။ ဆန်ဈေးလည်း ကျသည်။ ဆန်ဈေးကျတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလို့ ဆန်ဈေးတွေ ကျသလဲ တွေးတော စဉ်းစားခန်းဝင်တုန်း တိုက်ဆိုင်မှု တခုက ရယ်စရာ ဖြစ်ရသေးသည်။ ထိုင်းလူမျိူးတွေက ထမင်းစား နည်းသည်။ အခြား သားရေစာ နဲ့ အစားအသောက်တွေ စားကြတာများသည်။ သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ကွေ့တီယို၊ အကင်၊ ကောက်ညှင်း စတာတွေ ထမင်းလွတ် စားကြသည်။ ကြက်ကြော်၊ ပီဇာ၊ ဟန်ဘာဂါလို အသင့်စားတွေလည်း စားကြသည်။ ထမင်းစားသည့်ပုံစံက ထမင်းနဲနဲ ဟင်းများများပုံစံ၊ ထမင်းကို လက်ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံး တလုံးစာသာ စားကြသည်။
ဆီးချိူ ရောဂါ ရနေသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သွေးထဲ ဂလူကို့စ်ပါဝင်မှု စစ်ပြီးတိုင်း ဆရာဝန်က ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် လျှော့စားဖို့ပြောသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ညနေစာ ထမင်း တနပ် လျှော့စားသည်။ ဒါလည်း နောင်တိုင်းလိုက်တိုင်း တက်မြဲ၊ ဆီးချိူပညာပေး ဆောင်းပါး တပုဒ်အောက်မှာ ရေးထားသည့် ကောမန့်တခုကိုပင် သတိရမိသေးသည်။ ဆီးချိူဝေဒနာသည် အဖို့ကတော့ ထမင်းတောင် အဆိပ်ဖြစ်တယ်တဲ့၊ ဒါနဲ့ တနပ်ထဲစားတဲ့ မနက်စာကိုပဲ အများကြီးမစားပဲ လျှော့ဖို့ စဉ်းစားရပြန်သည်။ ထိုင်းတွေ စားသလို လက်ဘက်ရည် ပုဂံတလုံးစာသာ စားတော့မည်တဲ့၊ ထိုင်းတွေလည်း ထမင်းစားသာနည်းတာ အချိူကြိုက်ပြီး အချိူတွေ စားလို့ ဆီးချိူရောဂါ အဖြစ်များသတဲ့၊ ပြောမိရင်း မြန်မာတွေကတော့ ထမင်း တနေ့ကို သုံးနပ်တောင် စားလို့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များတာရယ် ဓာတုဆေးဝါးတွေသုံးတဲ့ အစားအစာတွေရယ်ကြောင့် အခု ဆီးချိူရောဂါသည်တွေ များလာသတဲ့ ပြောမိကြသည်။
" ဒါ့ဖြင့် ထမင်းတွေ လျှော့စားနေကြလို့ ဆန်ဈေးတွေ ကျသလားကွာ" တဲ့ ဟုတ်များနေမလား၊ လူတွေ ထမင်းလျှော့စားနေကြသလားလို့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အတွေးရောက်လိုက်သေးသည်။
ပြီးခဲ့သည့်(၂) နှစ်ခန့်ကလည်း ထိုင်းမှာ စပါးဈေးတွေကျသေးသည်။ ထိုအခါ လယ်သမားတွေကို ထိုစဉ်ကအာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်က စပါးဈေးမရက ဈေးကောင်းရသည့် ခွေးလှေးယားသီး စိုက်ပါလား ပြောတာ တောင်သူလယ်သမားတွေ အလွန်အမင်း စိတ်ဆိုးကြသည်လို့ ကြားလိုက်ရသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းပဲ တက်မှာပဲ၊ ကျမှာပဲ လို့ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်သူက လက်လွတ်စပယ် ပြော၍ မရ၊ အစိုးရမှာ ထိန်းကျောင်းရမည့် တာဝန်ရှိလေသည်။ ဒါတောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘုရင့် စီမံကိန်း တခုက ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံ စားဝတ်နေရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးထား၊ စီမံထားတာတွေ များစွာ ရှိနေတဲ့အတွက် ခံသာနေတာပင်။ စိုက်ပျိူးရေးထွက်ကုန်တွေ၊ မွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေ ပေါလျှံနေအောင် နည်းပညာတွေဖြင့် စီမံထားသည့်အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ် သိပ်မခံစားရပေ။
The Royal Projects ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က မိမိအရပ်ဒေသမှာ သက်တောင့်သက်သာ လွယ်လွယ်ကူကူဖြင့် ရပ်တည် ရှာဖွေ စားသောက်နေနိုင်ရေးဖြစ်ပါသတဲ့။
(1. Agriculture 2. Environment 3. Public Health 4. Occupational Promotion 5. Water resources 6. Communications 7. Public Welfare, and 8. Others ) ဆိုသည့်( ၁) လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေး၊( ၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းရေး၊( ၃) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ (၄) အလုပ်အကိုင်မြှင့်တင်ရေး၊ (၅) ရေအရင်းမြစ်များ၊ (၆) ဆက်သွယ်ရေး၊ (၇) လူမှုဖူလုံရေး၊( ၈) အခြား စတဲ့ ကဏ္ဍခွဲ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဒေသစီးပွားရေး မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်ဖို့ ဦးတည် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ သိရသည်။ တကယ်တော့ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွဲတွေမှာ ခုခံအားတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယခုလို အခြေအနေမှာ ပိုပြီးသိရသည်။ ခုခံအားကောင်းက တက်လိုက် ကျလိုက် နှိပ်စက်တတ်သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းဆိုတာကို တွန်းကန်ထားနိုင်ပေလိမ့်မည်။
ပြည်ပထွက်ကုန်တွေကိုသာ အဓိက ဝယ်ယူသုံးစွဲနေရသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်သည့် ဒဏ်ကို ခါးဆီးခံနေရပေအုန်းမည်၊ ဒီဒဏ်တွေကို ခုခံ တွန်းလှန်နိုင်အောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းကောင်း ရှိဖို့ လိုသလို စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း စားသုံးသူ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး အများပြည်သူ အဆင်ပြေအောင် သမာအာဇီဝကျကျ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ခြင်းဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ကူညီဖို့ လိုလေသည်။ ဒါတင်မက အတ္တကို ရှေ့တန်းမတင်ပဲ မိမိအတွက်လည်း အကျိူးရှိ၊ အများအတွက်လည်း အဆင်ပြေမည့် ဈေးကွက်ရောင်းနည်းမျိူး ဖြင့် ပြည်သူအားလုံး အဆင်ပြေအောင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချ ကြမည်ဆိုပါက အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း သက်တောင့်သက်သာ ရှိမည့် ခုခံအားလေးတခု ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလို့ တွေးမိပါသည်။ ကိုယ်သုံးသလို လူတိုင်း သုံးနိုင်ကြပါစေ၊ လူတိုင်း လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း လူ့အသုံးအဆောင်တွေကို ကိုယ်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာဖြင့် တန်းတူညီမျှ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြပါစေ ဆိုသည့် စိတ်ထားမွေးပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား သည့် စနစ် ပေါ်ထွန်းပါစေ၊
" အများကဆင်းရဲနေပြီး ကိုယ်တယောက်ထဲ ချမ်းသာနေတာ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်" လို့ လူထုခေါင်းဆောင် ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂိုလ်ရဲ့ မှတ်သားစရာ စကားလေးက ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ အများအကျိူး အတွက် ရှေ့ရှုပြောခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။
"အရိပ်တကြည့်ကြည့်" ၁၂ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၅) အမှတ်(၄၈)မှ
စီစီတီဗွီ လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ လုံခြုံးရေးကင်မရာတွေ ပေါ်လာပြီး အသုံးပြုကာစက စီစီတီဗွီကနေ လူဆိုးကို ခြေရာကောက်မိတယ် ပြောသံကြားရရင် တရုတ်ပြည် သတင်းဌာန CCTV ( China Central Television) ကနေ ရှာတွေ့ မိတယ်ချည်းထင်နေတာ၊ နောက်တော့မှ ( Closed- circuit television camera) ဆိုတဲ့ ကင်မရာတပ်ထားပြီး လှုပ်ရှာမှုတွေကို မှတ်တမ်းယူထားလို့ရတဲ့ ကင်မရာကို ပြောမှန်းသိတော့သည်။ အခုခေတ်မှာတော့ စီစီတီဗွီကို အိမ်တို့၊ ဆိုင်ခန်း ရုံးခန်း နဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြလေပြီ၊ ထူးခြားတာက အစိုးရရုံးတိုင်းမှာ မတပ်နိုင်သေး၊ မကြာသေးခင်ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရုံးဝင်း အတွင်း M150 အချိူရည်ပုလင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲခံရတဲ့ သတင်းမှာ စီစီတီဗွီ တပ်မထားဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရသည်။
၂၀၀၇ခုနှစ် ခန့်အထိပင် အင်မတန် အရေးကြီးသည့် အစိုးရဌာနတွေမှာပင် စီစီတီဗွီ မတပ်ကြသေး၊ အရေးကြီးသည့် ဌာနကြီးတခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (ပြည်လမ်း)မှာပင် ထိုအချိန်အထိ စီစိတီဗွီမရှိခဲ့၊ နေပြည်တော် တပ်ကုန်း ရုံးသစ်ကြီးမှာတော့ ရှိသည်လို့ ဝန်ထမ်းတွေ ပြောတာ ကြားဖူးသည်။ ယနေ့ကာလ အမှုအခင်းတွေ ပေါများသည့် အချိန် စီစီတီဗွီ တပ်ထားက တရားခံကို အမြန်ဆုံးနှင့် အမှန်ဆုံး ဖော်ထုတ်လာနိုင်ပေလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့် စီစီတီဗွီ တပ်ထားတာ သိက ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မည့်သူကို ထိန်းချူပ်ရာလည်း ရောက်သည်၊ အဟန့််လည်း ဖြစ်သည်။ ရာဇဝတ်မှုလျော့ကျရေး ပညာပေးတာ တဖက်ကလုပ်ရင်း တဖက်ကလည်း စောင့်ကြည့်ရေးပါ ရှိနေက အကျိူးရှိမည်။ လူတယောက်ချင်းကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ ထားနိုင်မှာမဟုတ်သလို အရပ်သားပြည်သူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့်မရအောင် စောင့်ကြည့်နေတာလည်း ဘယ်သူကမှ မကြိုက်၊ လုံခြုံရေးကင်မရာ ဖြစ်သည့် စီစိတီဗွီတွေ တပ်ထားက စောင့်ကြည့်ရုံမက လိုအပ်ပါက တရားခံကို ချက်ခြင်း ဖော်ထုတ်ဖို့ လွယ်လေသည်။ သို့သော် အစိုးရမှာ ဘတ်ဂျက် မတတ်နိုင်လို့ တချိူ့က ဆိုလေသည်။ တကယ်က နေရာတကာ အစိုးရချည်း အားကိုးမနေပဲ ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်း ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်လို့ရတာတွေ များစွာ ရှိပါသည်။ ထိုင်းနိုငံမှာတော့ ဘဏ်တွေကအစ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာပါ ဝင်လာသူကို ပြူးပြဲကြည့်ပြီး မသင်္ကာသလို ဘယ်သူမှ စောင့်ကြည့်မနေ၊ လုံခြုံရေးကင်မရာ အပြည့် တပ်ထားတာ ဖြစ်သည်။ 7-11 လို စတိုးဆိုင် အသေးစားလေးတွေမှာလည်း တပ်ထားသည်။ ဈေးဝယ်သူ နောက်က တကောက်ကောက် ဘယ်သူမှ မလိုက်သလို ဘယ်သူကမှလည်း လူလစ်၍ ဆိုကာ ပစ္စည်းကို ကောက်ထည့်မသွား၊ လုယက်မှု မရှိဘူးလားဆိုက ရှိပါသည်။ အမှုအခင်းတွေ များပါသည်။ ရွှေဆိုင်၊ စတိုးဆိုင် စတာတွေကို ဝင်လုတဲ့အခါ ပါသွားတာ ရှိသည်။ ချက်ခြင်း ဖမ်းလိုက်နိုင်တာ ရှိသလို ပစ္စည်းပါသွားသော်ငြား စီစီတီဗွီကတဆင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို လိုက်လံရှာဖွေကာ အလွယ်တကူ ဖမ်းမိလေသည်။ အဓိကက တရားခံကို ဖမ်းမိဖို့ လွယ်ပြီး မှုခင်းနည်းပါးအောင် ထိန်းချူပ် ထားနိုင်တာ ဖြစ်သည်။ လမ်းမကြီးတွေမှာ စီစီတီဗွီ ခေါ် လုံခြုံရေးကင်မရာတွေ တပ်ထားသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ လမ်းထောင့် အိမ်ထောင့်တွေမှာ စီစိတီဗွီတွေ တပ်ထားသည်။ ဗီအိုင်ပီ ရပ်ကွက်မို့ မဟုတ်၊ လူနေသည့် ရပ်ကွက်တွေမှာ တပ်ထားတာ ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချူပ်ရေးမှုး ရုံးတွေ ရှိသည်။ ရပ်ကွက် လူကြီးတွေရှိသည်။ ရပ်ကွက်ထဲက လုံခြုံရေးကင်မရာကို ရပ်ကွက်ရုံးကနေ ထိန်းချူပ်တာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်တာ ရပ်ကွက်ရန်ပုံငွေ၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေထဲက တပ်ဆင်ပေးတာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် တပ်ချင်က မိမိဘာသာ ဝယ်တပ်ရသည်။ အစိုးရဌာနတွေမှာလည်း ထိုနည်း၎င်းပင်၊ ဌာနတွေမှာ လုံခြုံရေး စားရိတ်တွေ ရှိသည်။ မြန်မာပြည်မှာပင် အစိုးရဌာန အသီးသီးလိုက် လုံခြုံရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်ရှိသည်။ ယခင်ကဆို အရေးကြီးသည့် ဌာနတွေမှာ စစ်တပ်ရော၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရော ရှိပါလျက်နှင့် အရာရှိအချိူ့ကို လုံခြုံရေးဆိုကာ ညစောင့်ခိုင်းတာ ရှိသည်။ အဲဒီအတွက် ညကြေးရတာလည်း ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာအသိုင်းအ၀န်းနှင့် တွေ့ဆုံတာမှာ မေးခွန်းတွေ မေးကြတဲ့အထဲ အမှိုက်ပစ်တဲ့ ကိစ္စမျိူးဆိုက လမ်းထဲမှာ ဓါတ်တိုင်အသီးသီးမှာ စီစီတီဗွီရှိက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ဖို့ လက်တွန့် သွားနိုင်သလို စည်းကမ်းမဲ့သူကို ဖော်ထုတ် အရေးယူနိုင်လေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လမ်းဆုံလမ်းခွ မီးပွိုင့်မှာ ညည့်နက်သန်းခေါင် ဒါမှမဟုတ် နံနက်စောစော တလမ်းလုံးမှာ ကိုယ့်ကား တစီးထဲ ရှိလည်း မီးနီ မဖြတ်ကြ၊ မီးပွိုင့်မှာ စီစီတီဗွီတွေရှိရာ မှတ်တမ်းပါသွားက နောက်နေ့ အိမ်ကို စာရောက်လာမှာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စီစီတီဗွီ လုံခြုံရေး ကင်မရာကို အစိုးရက တပ်ထားတာ မဟုတ်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ တနည်းအားဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကိုင်တာဖြစ်သည်။ သူတို့ဆီမှာလည်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ငွေကောင်းသည်။ နေ့စဉ် လိုင်စင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး၊ ဒဏ်ငွေ စတာတွေ တဖွဲဖွဲ ဝင်လာနေတာ ဖြစ်သည်။ ဒါတွေကို စည်းကမ်းထိန်းချူပ်ရေးမှာ ပြန်လည် အသုံးပြုတာ ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတိုင်းက လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကို ကိုယ်စီဝိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တပတ်ခန့်က သမီးဖြစ်သူက ဖြတ်ပိုင်းလေး လာပြသည်။ ဖြတ်ပိုင်းမှာ စီစီတီဗီက မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံလေးနှင့် ဖြစ်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ သူက အနောက်ကထိုင်စီးပြီး ဦးထုတ်မပါ၊ မောင်းသည့် သူငယ်ချင်းက ဦးထုတ်ဆောင်းထားသည်။ ငြင်း၍မရနိုင်သောပုံ၊ သူတို့ပုံကြီးက ထင်းနေတာဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ကို ဝိုင်းပြထားပြီး လူကိုပါ အနီဖြင့် ဝိုင်းထားသည်။ ဦးထုတ်မဆောင်းတဲ့ အတွက် ဒဏ်ငွေ ဘတ်(၄၀၀) ပေးဆောင်ဖို့ ဖြတ်ပိုင်းကို တက္ကသိုလ်က အဆောင်လိပ်စာနဲ့ ပို့လိုက်တာ ဖြစ်သည်။ နောက်တနေ့ ရဲစခန်းမှာ သွားဆောင်ရသည်။ မကောင်းမှုဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ၊ ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးမလွတ်ဆိုတာ အခုခေတ်လို နည်းပညာတွေ ဆန်းသစ်သည့် အချိန်မှာ ပိုပြီး မှန်ကန်လေသည်။
မြန်မာပြည်မှာ မှုခင်းတွေ များစွာဖြစ်သည်။ အများစုမှာ တရားခံမပေါ်၊ အမှုလည်းပျောက်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း လူအင်အားနည်းတာ အကြောင်းပြကာ တရားခံကို တရားလိုကပင် ပြန်ဖမ်းပေးနေရသည့်အဖြစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ကျူးလွန်ခံရသူက လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းပေးနေရသည့် အဖြစ်၊ မကောင်းမှုတွေ ဆိတ်ကွယ်ရာတင်မက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လူကြားသူကြား လူရှေ့သူရှေ့ အများပြည်သူကြား ဖြစ်နေကြသည်။ အားကိုးတကြီး တိုင်တန်းလည်း ဥပဒေတွေက မခိုင်မာတော့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်၊ ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးမလွတ်အောင် အောက်ခြေအဆင့်ကစလို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုနေပေပြီ၊ စောင့်ကြည့်စရာ အထူးအထွေကတော့ စီစိတီဗွီခေါ် လုံခြုံရေးကင်မရာခေါ် စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေ နေရာအနှံ့ တပ်ဖို့ လိုနေပြီး သက်မဲ့တွေကနေ သက်ရှိတွေကို စောင့်ကြည့်ပေးရင်း ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ လိုနေပေသည်။ သက်ရှိနေရာမှာ သက်မဲ့ကို အစားထိုးရင်း မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်ပေးဖို့ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 11:04 PM No comments:
" ဈေးသည်ဈေးဝယ် စုံလို့ရယ်" ၅ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၅) အမှတ်(၄၇)မှ
" ဈေးသည်ဈေးဝယ် စုံလို့ရယ်"
အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးချက်စားမယ် ဆိုပြီး ငှက်ပျောအူ လိုက်ရှာဝယ်တာ ဈေး(၃)ဈေးလောက် ရောက်ခဲ့ရသည်၊ တကယ်တော့ ဘယ်ဈေးမှာ ငှက်ပျောအူ သေချာပေါက် ရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပေမယ့် ချက်မယ့် မနက် အစောကြီး သွားမဝယ်ချင်တဲ့အတွက် ညကတည်းက ကြိုဝယ်ထားချင်တာကြောင့် ညဖက်ဖွင့်တဲ့ ဈေးတွေ ပတ်သွားနေမိတာ ဖြစ်သည်။ တကယ်တန်းကျ ဝယ်နေကျ မနက်ဈေးမှာပဲ ရောင်းနေကျ ဆိုင်က ငှက်ပျောအူ ဝယ်လိုက်ရလေသည်။ ဈေးတကာဈေး သွားတဲ့ အတွက် ဘယ်ဈေးက ဈေးနဲနဲ တင်ထားတတ်ပြီး ဘယ်ဈေးက သက်သာတယ်ဆိုတာမျိူး၊ ဘယ်ဈေးကဖြင့် တောသည်လေးတွေ လာရောင်းတတ်လို့ အရွက်လေးတွေ ငါးသေးငါးမွှား တိုလီထွာလီလေးတွေ ရတတ်တယ်ဆိုတာ သိရသည်။ ထိုင်းမှာရှိတဲ့ မွေးမြူရေးငါးတွေ မစားချင်က ရေချိူငါးလေးတွေ မြစ်ငါး ချောင်းငါး လယ်ငါးလေးတွေ ရတတ်တဲ့ ဈေးတွေ လိုက်ရှာဝယ်ရင်း ဈေးကြမ်းပိုးဖြစ်ကာ တဈေးကနေ အခြားဈေးကို နေ့အလိုက် ပြောင်းရွှေ့ ရောင်းကြတဲ့ ပျံကျဈေးသည်တွေနဲ့ပါ ဈေးအမျိူးမျိူးမှာ ပြန်ဆုံဖြစ်ရလေသည်။ ဒီတော့မှ ပျံကျဈေးသည်တွေ နေရာရွှေ့ကာ တဈေးပြီးတဈေး ဈေးလိုက်ရောင်းရတာ သိလိုက် ရလေသည်။
ချင်းမိုင်မှာ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ပလက်ဖောင်းမှာ ဈေးရောင်း၊ တာဝန်ရှိသူက လိုက်ဖမ်း ထွက်ပြေး ဒါမျိူး မမြင်ရပါ၊ သူတို့ကို သလာနာ့ လိုခေါ်သည့် ပျံကျဈေးလေးတွေ ရပ်ကွက် နေရာအလိုက် နေ့အလိုက် ဖွင့်ပေးလေသည်။ ဆိုင်နှင့် ကန္နားဖြင့် မရောင်းနိုင်သည့် ဈေးသည်တွေ အဆိုပါဈေးတွေမှာ လိုက်ပြီး ရောင်းနိုင်သည်။ ဈေးတွေပုံစံက ရန်ကုန်မှာ ယခင်က ရှိခဲ့သည့် အခွန်လွတ်ဈေးပုံစံမျိူးတွေ ဖြစ်သည်။ မနက်ဈေး မရှိ၊ နေ့ခင်း တစ်နာရီလောက်ကမှ ဈေးစခင်းပြီး ည(၈)နာရီ ဝန်းကျင်ခန့် အထိ ရောင်းချကြသည်။ ညနေ ကျောင်းဆင်း၊ ရုံးဆင်း၊ အလုပ်ပြန် ဝင်ဝယ်ကြသည်။ အကင်မျိူးစုံ၊ အကြော်အလှော် ၊ အသင့်ချက်ပီးသား ဟင်း၊ စားစရာအမျိါ်မျိူး ၊ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သာမက လူသုံးကုန်နဲ့ ကုန်ခြောက်တွေပါ ရောင်းကြသည်။ စားစရာဆိုက တခါသုံးဖော့ ဘူးတို့၊ ပလတ်စတစ် အိတ်တို့ဖြင့် ထည့်ယူကြရသည်။ ။ ခုံတွေစားပွဲတွေ ခင်းပြီး ထိုင်စားလို့ရသည့် ဆိုင်မရှိ၊ ဈေးတိုင်းအင်မတန်စည်ပြီး ရောင်းကောင်းကြသည်။
မြန်မာပြည်ထက် သူတို့ ဈေးသည်တွေ သာတာက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေတာ ဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်းသည့် ဈေးသည်ကလည်း ဟိုင်းလတ်စ်ကားနှင့် ပစ္စည်းသိမ်းပြန်တာဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာ ဘေးက ပစ္စည်းတင်သည့် ဘေးတွဲတွဲချိတ် ဆောက်ထားသည့် ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဟိုဈေး သည်ဈေး ကူးပြီး ရောင်းကြတာဖြစ်သည်။ ဒီလိုဈေးတွေကို ပြည်သူတွေ အတော်အားထားရသည်။ ပုံမှန်ဈေးကြီးတွေက မနက်တပိုင်းသာ ဖွင့်တတ်ကြရာ အဆိုပါ ပျံကျဈေးတွေက ညနေဖက် ဖွင့်သည့်အတွက် အလုပ်သမား ရုံးသမား ကျောင်းသမား အိမ်ရှင်မများအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသည်။ ချက်စားချင်က ချက်စားဖို့ ဝယ်လို့ ရသလို အသင့်စားလိုက ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ထားတာတွေ ဝယ်သွားရုံပင်။
ထိုင်ပြီး စိတ်အေးလက်အေး စားချင်ရင်ဖြင့် ညဈေးတန်းတွေ ရှိသည်။ စားသောက်ပြီး စိတ်အေးလက်အေး လမ်းလျှောက်လို့လည်းရသည်။ အဝတ်အထည် အသုံးအဆောင်နှင့် အခြားတိုလီမိုလိတွေ ဝယ်လို့ရသည့် ဆိုင်ကလေးတွေရှိသည်။ ညဈေးတန်းကတော့ နေ့အလိုက် ရောင်းချသည့် ညဈေးတန်းနှင့် နေ့စဉ် ပုံမှန်ဖွင့့််သည့် ညဈေးတွေ ရှိသည်။ စနေနေ့မှာ ချင်းမိုင်ဂိတ်လို့ ခေါ်သည့် နေရာမှာ ဖွင့်သည့် စနေဈေးနှင့် ထပ်ဖယ်ဂိတ်မှာ ဖွင့်သည့် တနင်္ဂနွေဈေးတွေက နာမည်ကျော်ပင်၊ ချန်ကလန်လမ်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ဘာဇာ ညဈေးကတော့ ညစဉ် ဖွင့်သည့် နာမည်ကျော် ညဈေးကြီး ဖြစ်သည်။ ဈေးသည်တွေ အတွက် နေရာအနှံ့ လိုက်ရောင်းလို့ရသည့် အခွင့်အရေး ရလေသည်။ အဆိုပါ ညဈေးတွေမှာတော့ သားငါးတွေ မရောင်း၊ သူတို့အဓိက ဦးတည်တာက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ၊ ဒါ့ကြောင့် သန့်ရှင်းပြီး လှပနေအောင် စွဲဆောင် ပြင်ဆင်ထားကြသည်။
စနေဈေး၊ တနင်္ဂနွေဈေးတွေဆိုတာ တကယ့် လူသွားလမ်းမှာ ရောင်းတာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေ့ဆိုက အဲဒီလမ်းတွေမှာ လူတွေပြည့်နေပြီး ကားတွေက အခြားလမ်းက ပြောင်းမောင်းကြသည်။ ဈေးသည်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးပွားရှာခွင့် ပြုထားတာဖြစ်သည်။ ဈေးသည်တွေတင်မက အလှုခံလိုသူ၊ တောင်းရမ်းသူတွေလည်း စည်းကမ်းတကျ အလှုခံ၊ တောင်းခံခွင့် ပေးထားလေသည်။ မသန်စွမ်းကဲ့သို့ အစုအဖွဲ့နှင့် အခြား အစုအဖွဲ့တွေက မိမိတို့ အသင်းအဖွဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာလိုက သက်ဆိုင်ရာထံကနေ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ယူကာ အလှုခံခွင့် ရှိလေသည်။ လမ်းရဲ့ တဖက်တချက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဈေးသည်တွေက ဆိုင်ခင်း ရောင်းပြီး လူတွေက လမ်းပေါ်ကလျှောက် ဆိုင်တန်းတွေရှိရာ ပလက်ဖောင်းဆီငေး၊ လမ်းအလည်ခေါင်မှာ အတီးအမှုတ် တူရိယာတွေနဲ့ ညီညီစီစီထိုင်ပြီး တီးမှုတ် အလှုခံသူတွေ ရှိသည်။ လမ်းမကြီးမှာ ရှည်လျားလွန်းသည့်အတွက် တော်တော်လျှောက်ယူရသည်။ တခါမှ ဆုံးအောင် မလျှောက်ဖူးသေးဆိုကာ လမ်းဆုံးအောင် လျှောက်မိပြီး မှ လာရာဖက်ကို မနည်းပြန်လျှောက်ရတာလဲ ကြုံဖူးလေသည်။ ။
အဆိုပါ လမ်းမကြီးတင်မက ဘေးတဖက်တချက် မြေကွက်လပ် အလွတ်တွေမှာပါ ဈေးဆိုင်တွေ ခင်းကြသည်။ ချင်းမိုင်ရိုးရာ အထည်မျိူးစုံ၊ လက်မှုအထည်လေးတွေ၊ အရုပ်ကလေးတွေ ကီးချိန်းကလေးတွေ၊ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ၊ အမှတ်တရ တီရှပ်၊ အိတ် စသဖြင့် စုံနေအောင်ရောင်းကြသည်။ အုန်းလက်ဖြင့် ဦးထုတ်ကလေး ထိုင်ရက်ပြီး ရောင်းသူလည်း ရှိသည်။ စိတ်ဝင်တစား ထိုင်ကြည့်နေသူရှိသလို သဘောကျကာ ဝယ်သွားသူလည်း ရှိသည်။ ငွေထည်လက်ဝတ်ရတနာ ဒီဇိုင်းတွေ၊ အလားတူ့ ဒီဇိုင်းမျိူး ဖယောင်းကြိုးဖြင့် ထိုးထားသည့် လက်ဝတ်အဆင်တန်ဆာလေးတွေ၊ ဖန်စီကျောက်ထည်ကလေးတွေ ရောင်းကြရာ တိုးဝှေ့ဝယ်ယူကြသည်။ လမ်းဘေးမှာပဲ ခုံလေးတွေ ခင်းပြီး မာဆတ်လုပ်ပေးတာလည်း ရှိသည်။ ပက်လက်ထိုင်ခုံတွေမှာ အနှိပ်ခံသူတွေလည်း တပုံတပင်၊ အဲဒီဈေးတွေမှာက အစားအသောက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း စားလို့ရအောင် တခါသုံးခွက်၊ ဇွန်းတို့ ထည့်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်သည်။ ကျကျနန ထိုင်စားစရာ နေရာတော့ လုပ်မပေးထား၊ လမ်းလျှောက်ရင်း စားသောက် ဈေးဝယ် တပြိုင်ထဲ လုပ်ကြလေသည်။
အများအားဖြင့် လမ်းလျှောက် စားသောက် ဝယ်ယူနေကြသူတွေက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများစုဖြစ်သည်။ ထိုင်းလူမျိူးတွေကတော့ ဈေးသည်တွေပေါ့၊ မြန်မာတချိူ့လည်း ရှိသည်။ မြန်မာအများစု ဈေးရောင်းတာ နိုက်ဘာဇားဖြစ်သည်။ နိုက်ဘဇားညဈေးကတော့ ပလက်ဖောင်းတလျှောက် တင်မက လမ်းမကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာပါ နေရာကျယ်ကျယ် ဆိုင်ခန်းကျယ်ကျယ်တွေ များစွာရှိသည်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အအေးခန်းဖြင့် ဖွင့်ထားသည့် မာဆတ်အခန်းတွေ ရှိသည်။ အေးအေးဆေးဆေး စားသောက် အနှိပ်ခံလို့ရသည်။ ထိုင်းမာဆတ်က နာမည်ကျော်ရာ တကူးတက အနှိပ်ခံသူတွေ များလှသည်။ နိုက်ဘဇာညဈေးက နေ့တိုင်းဖွင့်သည်၊ ဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စဆိုးဆိုင်၊ ဘားဆိုင် ၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိရာ စည်ကားလှသည်။ walking street လမ်းလျှောက်ဈေးဖြစ်သည့် စနေဈေး၊ တနင်္ဂနွေဈေးနှင့် နိုက်ဘဇားညဈေးတန်း အားလုံး တူညီသော အချက်မှာ နံနက် မိုးလင်သည်နှင့် သန့်ရှင်းနေတာ ဖြစ်သည်။ မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း ရှေးလူကြီးတွေ ပုံပြောပြသည့် ကြပ်ကုန်းအလား၊ ညဖက်မှာ အလင်းရောင်တထိန်ထိန်ဖြင့် စည်ကားတာ တွေ့ရပြီး မနက်ကျ ဈေးဆိုင်တွေ များစွာ ဖွင့်ထားခဲ့တာလို့ မထင်ရအောင် ခြေရာလက်ရာမပျက် လမ်းအတိုင်း ကားတွေ လူတွေ သွားလာကြနေကြသည်။
အဓိကကတော့ လူတိုင်း၊ ဈေးသည်တိုင်း စည်းကမ်းလိုက်နာကြလို့ပဲ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ် ထုတ်ပိုး သိမ်းဆည်းပြီး စုရပ်မှာ သွားပုံထားလိုက်တာနှင့် မနက်စောစော အမှိုက်သိမ် ကားက အလွယ်တကူ ကောက်တင်သွားတာဖြစ်သည်။ ဆိုင်သိမ်းမှ အမှိုက်တွေကို စုပြုံသိမ်းတာမျိူးမဟုတ်၊ ဈေးရောင်းနေရင်း စနစ်တကျ ကိုယ့်အမှိုက်အိတ်ထဲ ပစ်သည်။ ကိုယ့်ဆိုင်က ထွက်သည့် အမှိုက်ကို ချက်ခြင်း စုစည်းကာ ကိုယ့်အိတ်နှင့်ကိုယ် ထည့်သိမ်းသည်။ ဆိုင်တိုင်း ဒီလို စနစ်တကျ ထုတ်ပိုးထားခဲ့တာကို စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးက မိုးမလင်းခင် လာသိမ်းသွားသည်။ အဆိုပါအလုပ်မှာ တရက်မက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သောလည်း ထုံးစံမပျက်လုပ်နေကျပင်ဖြစ်သည်။ အမှိုက်တွေ ရှုပ်ပွညစ်ပေကျန်ခဲ့က အနားက အိမ်တွေ နှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ ပြည်သူတွေ ငြိုငြင်စရာ ဖြစ်လာနိုင်သော်လည်း ဈေးသည်တွေမှာ သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စ အကျင့်ဖြစ်လို့ တကူးတကပင် လုပ်တာမဟုတ်ပဲ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် လုပ်ရင်း ရောင်းဝယ်နေကြလေသည်။
အဆိုပါ ညဈေးတန်းတွေမှာ အမြဲလိုလို သန့်ရှင်းနေပြီး တခေါက်ရောက်ဖူးသူလည်း နောက်တခေါက်ကျ လျှောက်ရအောင်လို့ဆိုကာ အကြိမ်ကြိမ် လည်ချင်ပတ်ချင်သည့် နေရာ ဖြစ်နေလေသည်။ ညဈေးတန်းတွေကနေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါများလာပြီး အချိန်ပိုင်း ဈေးသည်လေးတွေ အဖြစ် သမာအာဇီဝကျကျ လုပ်ကိုင်ကြသူတွေ များလာသည်။ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကာ ပြည်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးကြသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ စိတ်ဝင်စားရာ တန်ဖိုးလည်း မများလှသည့် ဒေသထွက်ကုန် လက်မှု ပစ္စည်းလေးတွေ များစွာ ထုတ်လုပ် လုပ်ကိုင်ရသည်။ ထိုကမှ ဝင်ငွေရသည်။ အမြတ်အစွန်းတွေ ဆင့်ကဲရကြသည်။ အလုပ်တွေ ရလာကြသည်။ ညဈေးတန်းတွေကနေ မီးခိုးမထွက်သည့် စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ညဈေးတန်းတွေကတဆင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထုတ်ဖော်ခွင့်ရသည်။ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို ဖော်ထုတ်ပြသရာလည်း ရောက်သည်။ နိုင်ငံအသီးသီးကို တဆင့်စကား သတင်းရောက်ပြီး ဈေးတန်းလေးတွေဆီ ထပ်ကာထပ်ကာ လူတွေ ရောက်လာသည်ဆိုက ဈေးသည်ဈေးဝယ်ပိုလို့ပင် စုံလာပေတော့မည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 9:39 PM No comments: